Tamburinens skola: Information på Somaliska språket
Ogeeysiis iskoolka Tamburinen dhamaan waaalidiinta ay caruurtoodu dhigtaan.
Hal asbuuc ayaa kasoowareegay markii uu iskoolku gubtay, waana kumahadsantihiin sida aad noofahansantihiin oo aadna noocaawiseen. Hada waxaan wax idiinkaga faahfaahindoonaa dhismaha iskuulka hada waa ok qeyb kamidah iskuulka oo uusan gaarin dabku laakin shaqo badan ayaa harsan qeybta iskuulka ka mid ah ee gubatay.
Fasalada 1, 2, 4, 5, iyo 6aadka wili waxaalagu jiraa qiimeeynta inta oow laegyahay dhaawacoodu waxaana eey noqondoontaa biloowga diseember.
Marka la ogaado dhaawaca inta oowlaegyahay ayaa dib udhis lagu sameeyndoonaa waxeeyna qaadandoontaa dhismahu ilaa showroom bilood. Marka qeybta iskoolka kamidka ah ee gubatay wey xirnaandoontaa oo lamagelikaro
F klass iyo 1,2, iyo3 laga bilaabo isniinta 27 nofembar 1a iyo 1b waxeey ku dhigandoonaan galaas yadooda laakin 1c waxeey kusii dhigandoonaan förskola humlan.
Förskolka ardayda dhigato iyo 3xaadka waxeey ku dhigandoonaan fasaladooda sidi asbuucaanba ay ehaaday fasalada 2aad waxeey sii joogi doonaan ekorren. Förskolka sida kumeelgaarka ah u amaahiyay fasaladooda waxeey kusoolaaban doonaan laga bilaabo isniinta 4ta disembar.
Fasalka 4raad wexeey sii joogi doonaan iskoolka klockartorp laakin slöjdka iyo idrottka wexeey u imaandoonaan iskoolka tamburinen . Fasalada 5, 6xaadkuna wexeey sii joogi doonaan iskoolka borgsmo wexeey slöjdka iyo idrottka u imaandoonaan iskoolka tamburinen.
Wixi dhar ah ama wixikale ee idinkaga dhaawacmay waxeey sharciyan kamidyihiin ceymiska guriga sidaas darteed hadii ilmahaada ey wax uga gubteen iskoolka laxiriir ceymiska gurigaada. Waxaan idiinku tala siineeynaa in eey jiraan Tage skåp.
Mahadsanidiin maamulka Anna iyo Carolin
Upplagd av tamburinens skola kl. 21:22